နိုင်ငံတော်အစိုးရ | FLEGT
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွင်း ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ ညီချက် (VPA) နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်များရှိနေသော အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများပါဝင်သောအုပ်စုများရှိနေပါသည်။ ဥပမာ-အချို့ဝန်ကြီးဌာနများသည် သစ်တောကဏ္ဍတွင် အကျိုးအမြတ်တစ်ခုခုရှိနေပါလိမ့်မည်။ အစိုးရအကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင် သည်။
ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနများအနေနှင့် အလွတ်သဘောအခန်းကဏ္ဍကို တရား၀င်ဖြစ်လာစေပြီး တရားမ၀င်မှုများကို တိုက်ဖျက်နိုင်ခြင်းဖြင့် သစ်တောကဏ္ဍမှ အခွန်ရရှိမှုတိုးပွားလာခြင်း
သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများအနေနှင့် သစ်တောကဏ္ဍတွင် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအား မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း
တရားရေးနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့် သစ်တော ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများအား နှိမ်နင်းနိုင်မည့် အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း
ကုန်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနများတွင် သစ်တင်ပို့ခြင်းအား မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အခြားသော နိုင်ငံများနှင့် ပိုမိုခိုင်ခိုင်မာမာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး သစ်တောကဏ္ဍယုံကြည်ကိုးစားရမူတိုးပွားလာခြင်း
အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်များတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်စနစ်များ ရိုးရှင်းလွယ်ကူလာမည့် အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း
နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနများအနေနှင့် နိုင်ငံတကာသစ်တောမူဝါဒများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ့ပုံရိပ်မြှင့်တင်နိုင်မှုကြောင့် သံတမန်ရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း
သို့ရာတွင် မတူညီသော အမျိုးသားအဆင့်အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကျိုးအမြတ်များသည် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်သည် ("ကင်မရွန်းတွင် အကျိုးအမြတ်များ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း" ကဏ္ဍတွင်ကြည့်ပါ)။ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု အတွင်းမှာပင် အစွမ်းထက်သောအင်အားများက မတူညီသောလမ်းကြောင်း များဆီသို့ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါသည်။ VPA ၏ လိုအပ်ချက်အရ သစ်တောကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆန့်ကျင် သည့်အစိုးရအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများပင်ရှိနေနိုင်သည်။ ကန့်ကွက်သူများသည် VPA အား နားမလည်ခြင်း သို့မဟုတ် VPA အကောင်အထည်ပေါ်လာပါက ၎င်းတို့၏သြဇာအာဏာ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ မတူညီသည့်အစိုးရအဖွဲ့များသည် သစ်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်း၏ မတူညီသည့် အပိုင်းများ၌ တရားစီရင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အဖွဲ့များအကြား ထိရောက်သောညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများ မရှိဘဲဖြစ်နေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် ၎င်းတို့၏မတူကွဲပြားမှုများကို ကျော်လွှားပြီး အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အများဆန္ဒရရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ VPAလုပ်ငန်းစဉ် များသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို အတူတကွလုပ်ကိုင်လာစေပြီး တရားဝင် သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလွန်အရေးပါသော တိုးတက်ကောင်းမွန် သည့် ဆက်ဆံရေး နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်လာခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
အမျိုးသားအဆင့် VPA ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုယ်စားပြုရေး သေချာ စေခြင်းသည် အစိုးရအကျို ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေနိုင် ပါသည်။ အချို့ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အစိုးရများသည် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရအေဂျင်စီ များအကြား ချိတ်ဆက်မှုများ ခိုင်မာလာစေရန် အေဂျင်စီများအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတကာသစ်တောသုတေသနစင်တာ (CIFOR) ၏ သုတေသနလေ့လာချက်များအရ ကင်မရွန်း နိုင်ငံတွင် စက်လွှဖြင့် တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းမှသစ်၏ ၇၅%ခန့်ကို ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုနေပါသည်။ အစိုးရသည် အဆိုပါကုန်သွယ်မှုမှ မည်သည့်အခွန်မျှမရရှိပေ။ သို့သော် အစိုးရအရာရှိများသည် တရားမဝင် သစ်ခုတ်သူများနှင့် သစ်ကုန်သည်များမှ လာဘ်ထိုးထားသည့်ငွေများ နှစ်စဉ်အများအပြား ရရှိနေကြသည်။ Les Verts ဟုခေါ်သည့် အသေးစားသစ်ထုတ်သူများသည် လာဘ်ငွေအစား အခွန်သာပေးလိုကြသည်။ CIFOR သုတေသီများသည် Les Verts မှဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အထက်ပါအယူအဆကိုထောက်ခံသည့် အခွန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာတစ်စောင်တင်သွင်းခဲ့ သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် သစ်တောဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိများသည် ရာဇဝတ်မှုများကို တရားဝင်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ကန့်ကွက်ပြီး အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည်။
ရင်းမြစ်များ Cerutti, P.O. et al. 2013. Cameroon's Hidden Harvest: Commercial Chainsaw Logging, Corruption, and Livelihoods. Society and Natural Resources 26: 539–553. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်] and Pye-Smith, C. 2010. Cameroon's Hidden Harvest: CIFOR. Bogor, Indonesia. 30pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
VPA မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းကိုမည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်နည်း။